Ndakabatwa nevabereki vaMaidei ndichimusvira – Takabatwa tiri musvo! – Makuhwa.co.zw
Ndakabatwa nevabereki vaMaidei ndichimusvira – Takabatwa tiri musvo!
Sekurangana kwedu ndakasvika pa window remba yaaivata ndokuchema kunge gurwe zvakapa kuti amuke avhure window rake sekuti aibva aziva kuti ndini ndaiva ndasvika. Ndini uyo kata kupinda napa window kwakutambirwa ne mudiwa wangu maidei akaita zvokuvhura mapapiro kwakunditi mbundi ndiye tsvodi pamuromo chaipo. Mwana anga akapfeka rokwe remucheka mutete raiva rakapfava zvekuti kuribata waitoita ngati urikubata ganda chairo uku ainhuwirira somunhu anga achangobva mukushamba. Ndakachimupiruzira ndiye nhanzvi muhuro ndikanzwa mwana ofemera pamusoro. Mboro yangu kumira yaine yamira ndichiri munzira hangu asi apa yakabva yawedzera kuita danda kunge riya romupfuti.
Ndakachibva ndamuti mbaa mwana apa ndakagumhisa mboro yangu pamuviri pake mwana akabva angopera simba ndokupunzikira pasi paaive akawarira. Ndakachitanga kukatanura rokwe raanga akapfeka riya zvishoma nezvishoma kwakupinza ruoko mubhurugwa make wanikwe matota kare kare. Mwana ndakamumenya akasara ava bagwe kushama iniwo kwakukatanura mbatya dzangu dzose. Ndaka tanga kumutsvoda pamuromo ndochidzika kuhuro kwakumboita long stop pa mazamu awo andakayamwa kusvikira mwana akuita kuzvongonyoka souya ane mudzimu weshato ini kwakuti dzakei kumutomatisi kwacho kwakuchidya beche ndaiita zvokuti ndikamboti rurimi rwotekenedza kabhinzi ndochinja ndoita rokutsoda ungati muromo. Mwana akachibva ati aiwa zvakwana ndokunditi dzvii mboro kwakuiti mumukanwa make ndoo. Mboro yakamwiwa nekusveteva ingati chihwitsi chezvitanda chiya apa rume ndaingoyuwira mutezo wachioma nyama dzasungana nekuterera kunakirwa.
Related Topics:Ndakabatwa nevabereki